ယခုတွင်သင်သည်စမတ်ကျပါက Samsung Galaxy S7 | ကိုဝယ်ရန်အချိန်ဖြစ်သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | မိုဘိုင်း, Samsung
Samsung က Samsung Galaxy S8 နဲ့ Samsung Galaxy S8 Plus တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ပြီးတော့လူတိုင်းကသူ့ဒဏ်ရာတွေကိုလျက်ဖို့ပြေးကြပြီး \_ t (အနည်းဆုံးပြောရန်)တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်း၌စွဲမြဲနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း Grand Theft Auto ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်ပင်ပြုပြင်ထားသည့်ပေါက်ကွဲနိုင်သော Samsung Galaxy Note.
အရှုပ်တော်ပုံကိုဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့ပါSamsung Galaxy Note7၏အကြီးအကျယ်အရှုပ်တော်ပုံ !! ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုရီးယားနိုင်ငံစုံမှရရှိခဲ့တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေ၊ Big shit ကြိုက်တယ် Samsung Galaxy S3 ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုအရှုပ်တော်ပုံတရားဝင်ပြဌာန်းထားသောအချိန်ကာလမပြည့်မှီအထိထိခိုက်မှုရှိသည့်ဆိပ်ကမ်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ထားသော patch တစ်ခုဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည့်ပြcrisisနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်ကိုတွေ့မြင်ပါကကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post အတွက်အကြောင်းပြချက်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်တောင်းဆိုအနည်းငယ်စမတ်ဖြစ်နှင့်လူတိုင်းသတိပေးမှလွဲ။ အဘယ်သူမျှမ ဒီ Samsung Galaxy S8 (သို့) S8 Plus တစ်ခုမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်အလျင်စလိုမဖြစ်ပါနဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟာစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့တခြားရွေးချယ်စရာတွေကိုရှာပြီးနှိုင်းယှဉ်သည်အထိ၊ ဒီ Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့လောက်ကောင်းနေသေးသည်။ နိယာမအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့မည်သို့ထွက်လာမည်သို့မဟုတ် terminal ကိုသိုလှောင်ရန်ရှေ့သို့သွားသောအသုံးပြုသူများလက်ထဲတွင်အခြားပစ်ချသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။.
ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ။ မင်းရဲ့လက်တွေကိုမင်းခေါင်းထဲထည့်မထားနိုင်အောင်ငါ့အမှောင်မိုက်အတွေးတွေကြောင့်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခဲ့တယ်။ အမှန်မှာနဖူး၌လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့်အနည်းငယ်သာမန်သဘောဖြင့်မည်သူမဆိုမပြေးမီဖြစ်သည် ယူရိုတစ်ထောင်နီးပါးအတွက် terminal ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးအရမည်သို့ထွက်ပေါ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ, နှင့်ပိုမိုသောအကောင့်ထဲသို့ ဦး ဆောင်သောမှတ်ချက်7ပေါက်ကွဲမှု နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှ၎င်း၏စုစုပေါင်းဆုတ်ခွာမကြာခင်မှာပြောခဲ့ပေမယ့်ကြီးကျယ်တဲ့အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး Samsung အတွက်ကြီးမားတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သောထိုလေးစားဖွယ်ငွေကိုကစားခြင်းမပြုမီ၎င်းသည်တရားဝင်ရောင်းချရန်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်နှင့် terminal သည်ထိုနေရာတွင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုစတင်ရန်စတင်ရန်စဉ်းစားခြင်းသည်ယုတ္တိရှိသည်။ Samsung မှယခုလောင်းကြေးအသစ်
ထိုအကြောင်း ယေဘုယျအားဖြင့်ပျက်ကွက်မှုများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရောင်းဝယ်သောဆိပ်ကမ်းများတွင်တွေ့ရသည်, ဒီငါအံ့သြဖွယ်များနှင့်ခမ်းနား Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တွင်ဖြစ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်, ငါမပြောချင်ပါဘူး, ဒါကတည်ရှိဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဒါကြောင့်မြင်လျှင်ပြီးနောက်, သတိပေးချက်သို့မဟုတ်အများဆုံးလုံခြုံရေးအပေါ်ဖြစ်ခြင်းသာ။ ကောင်း၏ သတိပေးချက်
ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီ post မှာကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးချင်တာကဘာလဲ၊ Samsung Galaxy S8 သို့မဟုတ် S8 Plus ကို ၀ ယ်ဖို့ရွေးချယ်မယ့်အစားအချိန်တန်ပါပြီ။ \_ t အတည်ပြုပြီးသားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Samsung Galaxy S7 or S7 Edge ထဲကတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပါ အခုသူတို့ဟာအလွန်စျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီ။
ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သည် Samsung ရဲ့ Galaxy S7 ဥပမာ ၄၄၄ ယူရိုသာရနိုင်တယ် ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမေဇုံစတိုးဆိုင်၌.
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာသည်မှန်လျှင် Samsung Galaxy S7 Edge ရဲ့ကွေးကောက် bezelsဒါဆိုအခုသင်ပိုက်ဆံနည်းနည်းလောက်ထုတ်ပေးရမယ် ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူတို့ဟာယူရို ၅၁၉ ယူရိုနဲ့အတူတူပဲ.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤ Samsung မှကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာများကိုတွေ့မြင်လိုက်သောအခါသူတို့သည်ငါတို့အားထုံးတစ်ခဲနှင့်သဲတစ်ကောင်ပေးကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်ကံကောင်းခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည် ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော့်ကိစ္စက ဒီ Samsung Galaxy S8 (သို့) S8 Plus အသစ်ကို ၀ ယ်ဖို့ငါရွေးမှာမဟုတ်ဘူး အများကြီးလျော့နည်းဘို့ငါတို့7အကောင်းဆုံးနှစ်ခု terminal ကိုနေသော Samsung Galaxy S7 သို့မဟုတ် S2017 Edge ရနိုင်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်သတ္တိလိုချင်တယ်ဆိုရင် ဤ Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အသစ်များကိုဝယ်ယူရန်အတွက်သင့်ငွေကိုစွန့်စားပါဒီမှာငါမင်းကိုထားခဲ့ပါ အမေဇုံစတိုးတွင်နှစ် ဦး စလုံးဆိပ်ကမ်းကြိုတင်မှာကြားထားများအတွက်တိုက်ရိုက် link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ယခုတွင်သင်သည်စမတ်ကျပါက Samsung Galaxy S7 ကို ၀ ယ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်
မင်္ဂလာညနေခင်းဖရန်စစ်ဆန်။ သင်၏ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းယခု S7 သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူရန်နှင့် s8 မည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ငါအတူတူပဲအမြဲတမ်းလုပ်တယ်၊ ပထမယူနစ်တွေရဲ့ပျက်ကွက်မှုတွေ (အမြဲတမ်းမဟုတ်တာ) ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပြုပြင်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏သံသယမှာသင်သည် S7 ကို ၂၀၁၇ ၏အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းအဖြစ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စတိုးဆိုင်များရှိမိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းချသူများပင်စာဖတ်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းကိုရပ်တန့ ်၍ မရပါ။ ပြသနာအများကြီး၊ ဟုတ်တယ်၊ အနီရောင်လိုင်းပါ။ ဖန်သားပြင်တွေကပြproblemsနာတွေဖြစ်ရင်ငါရူးသွားမယ်။
ဒီဟာကမှန်လားဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဖြေရှင်းလိုက်တာလားလို့ငါ့ကိုသင်ပြောပြနိုင်မလား။ ကျွန်တော်အမှိုက်ပုံးထဲယူရို ၅၀၀ ပစ်ချင်ပါတယ်
လုံးဝသဘောတူတယ်။ “ အကယ်၍ သင်ကစမတ်နေပြီဆိုရင် Samsung Galaxy S7 ကို ၀ ယ်ဖို့မသင့်အချိန်ပဲ။
ဒီနေရာဟာလှပတဲ့သေနတ်တစ်လက်ထက်မကပိုပါတယ်။ Samsung ကကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံး Galaxy ဒါမှမဟုတ် S4 လိုဖုန်းကောင်းတွေထားခဲ့ပေမယ့်ဒီ S7 နဲ့အထူးသဖြင့် EDGE ဟာတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် FOOL ဖြစ်ပါက Samsung Galaxy S7 ကို ၀ ယ်ရန်အချိန်တန်ပြီ။